You are here: Home somal Wasaarada Dhalinyarada Iyo Ciyaaraha Waxay Ku Fashilantay Shaqadii Ay Qaranka U Haysay
Wasaarada dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiisku waxa ay ka kooban tahay saddex qaybood oo kala ah waaxda dalxiiska,waaxda ciyaaraha iyo waaxda dhalinyarada. Wasaaradu waxa ay si cad ugu guuldaraystay saddexda waajiba,tusaale ahaan waaxda ciyaaraha waxa u markhaati ah guuldaradeed ciyaaraha gobalada ee hada taagan,waxa ay dajin kari waayeen jadwal sax ah iyadoo tiraba dhawr jeer dib loo dhigay. Waxa kale oo ay siyaasad cad u dajin kari waayeen horumarinta ciyaaraha Somaliland
qaybahooga kala duwan,tababarida iyo kobcinta awooda garsoorayaasha kubada iyo waliba hirgalinta naadiyo si rasmi ah u hawl gala oo leh xidhiidh kubadeed qaran oo madaxbanaan.
Marka aynu eegno,waaxda dhalinyarada waxa ay wasaaradu si xun ugu fashilantay wacyi galinta iyo jihaynta
dhalinyarada Somaliland,haday noqon lahayd ka wacyi galinta tahriibta,balwadaha iyo wixii la hal maala. Waxa ay tahli kari wayday in ay halabuurto afkaaro dhalinyarada shaqo loogu abuurayo. Dhalinyaradu waa dadka ugu badan Somaliland ee hadana aan ka helin wax adeega wasaarada dhalinyarada.
Waaxda saddexaad oo ah waaxda dalxiiska iyada waxa aan odhan karaa maba fahansana masuuliyiinta wasaarada joogaa muhiimada ay waaxdani ku fadhido iyo waxa looga dan leeyahay toona,iyo waliba halka ay kaga hagaagi lahaayeenba. Waa hawl shaqo abuur looga samayn lahaa dhalinyarada Somaliland balse waxa lafta ka jabiyay masuuliyiinta wasaarada oo u qaatay wasaarada bakhtiyaanasiim amba lottery ay heleen.